No. 2092, Saturday, March 23, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2092, Saturday, March 23, 2019
No. 2092, Saturday, March 23, 2019
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၃ ရက် (စနေ၊ မတ် ၂၃၊ ၂၀၁၉)
သက်သေခံပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရန် GGS ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူနှစ်ဦးကို ချုပ်ရက်ရမန်ထပ်ယူ
အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသော GGS ကုမ္ပဏီမန်နေဂျင်းဒါရိုက် တာ ဦးသိန်းထွေးနှင့် မန်နေဂျာ ဦးသူရအုံတို့ကို အမှုနှင့်ပတ်သက် သည့် သက်သေခံပစ္စည်းများသိမ်း ဆည်းရန်နှင့် သက်သေများဆက်လက် စစ်ဆေးရန် ယမန်နေ့ရုံးထုတ်တွင် တရားလိုအဂတိကော်မရှင်က ဒုတိယအကြိမ်ချုပ်ရက် ရမန်ထပ်မံတောင်းခံသည်။
ဝန်ကြီးဦးမြင့်မောင်ကို တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ကန့်ကွက်သူမရှိ လွှတ်တော်အတည်ပြု
နိုင်ငံတော်သမ္မတ အဆိုပြုသည့် တနင်္သာရီတိုင်း ခေတ္တဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင်ကို ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် တိုင်း လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအ ဝေးတွင် ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုခဲ့သည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် အရပ်သားငါးဦး လက်နက်ကြီး ကျည်ထိမှန်သေဆုံး၊ ရှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် စည် တောင်ရွာတွင် မတ်လ ၂၁ ရက်ညက ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီး လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲ ၍ အမျိုးသားသုံးဦးနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦး စုစုပေါင်း အရပ်သားငါးဦး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီး ရှစ်ဦးဒဏ်ရာ ရရှိသည်။
နိုင်ငံခြားသားနှစ်ဦးထံမှ ကန်ဒေါ်လာအတု သုံးသိန်းကျော်ဖိုး ဖမ်းမိ
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင် နိုင်ငံခြားသားနှစ်ဦးထံမှ ကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန်အတုများနှင့် အတုပြုလုပ် သည့် စက်ပစ္စည်းများဖမ်းဆီးရမိ ကြောင်း ကျောက်တံတားမြို့မရဲ စခန်းမှူးက ပြောသည်။ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းရှိ ချမ်းမြေ့တည်းခိုခန်းတွင် တည်းခို နေသည့် အသက်(၃၃)နှစ်ရှိ ကင်မရွန်းနိုင်ငံသား Mr. Guillaume Nekndo Tchoungang ၏အခန်း အတွင်းမှ ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန်အတု ၃,၄၇၁ ရွက်နှင့် အသက်(၄၆)နှစ်ရှိ Mr.Charles Abe Etounit ၏ အခန်းအတွင်းမှ ဒေါ်လာအတုပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို မတ်လ ၂၁ ရက်ကသိမ်းဆည်းရမိခြင်း ဖြစ်သည်။
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်မှုဆိုင်ရာ ပြောကြားချက် အတိုက်အခံပါတီဝေဖန်
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလက် မှတ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ် ရာတွင် ကြန့်ကြာမှု၊ တစ်ဆင့်နှိမ့် ဆက်ဆံခံရမှုအပေါ် အခွင့်အရေး တစ်ပြေးညီရရန် ဝန်ကြီးကို ပြောပေးမည်ဟူ၍ ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူက ပြောဆိုခြင်းသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို နှုတ်မိန့်ဖြင့် ကျော်လွန် ဆောင်ရွက်သည့် သဘောဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ က ဝေဖန်သည်။ ယင်းသို့သော စကားကို မတ်လ ၁၅ ရက် ပဲခူးမြို့ လူထု တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံတော်၏ အ တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆို ပါ တွေ့ဆုံပွဲ၌ ဒေသခံပြည်သူ တစ်ဦးက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် နှင့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ မှတ်ပုံ တင်နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြု လုပ်ရာတွင် ခွဲခြားမှုများရှိနေ ကြောင်း အတိုင်ပင်ခံထံ အသိ ပေးသည့်အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်က သက်ဆိုင်ရာ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဖြေ ရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားဖူးသည်။
အောင်လံတွင် သင်္ကြန်ကာလ အဝေးပြေးယာဉ်စီးခ ဈေးမတက်စေရေး ဆွေးနွေးမည်
မဟာသင်္ကြန်ကာလ တွင် အဝေးပြေးယာဉ်စီးနင်းခ မြင့်တက်ခြင်းမရှိဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း ပြေးဆွဲစေရန် သက်ဆိုင်ရာ အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ များနှင့် ယခု မတ်လအတွင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အောင်လံမြို့နယ် စားသုံးသူရေး ရာဦးစီးဌာန မြို့နယ်ဦးစီးမှ
တောင်ကြီးမြို့တွင် ကမ္ဘာ့ရေနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ
ကမ္ဘာ့ရေနေ့ (World Water Day) အခမ်းအနားကို တောင်ကြီးမြို့ အောက်မေ့ဖွယ် ဓမ္မာရုံခန်းမတွင် မတ်လ ၂၂ ရက် က ကျင်းပခဲ့သည်။
ကျိုက်ထီးရိုးအမှတ်တရ ဝါးသေနတ်နှင့်ဓား ကုန်ကြမ်းရှား၍ ရောင်းအားကျ
မွန်ပြည်နယ်ကျိုက် ထိုမြို့နယ်တွင် ကျိုက်ထီးရိုးအ မှတ်တရ ဝါးသေနတ်နှင့်ဓားကုန် ကြမ်းရှားသဖြင့် ကုန်ချောဈေးတက်ပြီး ရောင်းအားကျနေကြောင်း ဝါးသေနတ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများက ပြောသည်။
တစ်ဒေါ်လာ ကျပ် ၁,၅၀၀ အောက်ပြန်ကျ
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များထံမှ ဗဟိုဘဏ်က ကန်ဒေါ်လာများ ဝယ်ယူနေသော်လည်း ပြည် တွင်းငွေကြေးဈေးကွက်တွင် တစ် ဒေါ်လာကျပ် ၁,၅၀၀ အောက် စတင်ကျဆင်းပြီး ကျပ်ငွေတန်ဖိုး မြင့်တက်သည်။
MSMEs လုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေများ ပိုမိုထုတ်ချေးပေးရန်လိုဟု ဒုသမ္မတပြော
နိုင်ငံအတွင်းရှိ စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၉၉ ရာခိုင် နှုန်းသည် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (MSMEs) များဖြစ်သည့်အ တွက် ယင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရန် ချေးငွေများ ပိုမိုထုတ်ချေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ် ကြောင်း အသေးစား၊ အငယ
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်အတွက် အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းအချို့ လက်မှတ်ခ ပုံမှန်ထက်နှစ်ဆခန့် တိုးမြှင့်ရောင်းချဟုဆို
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်အ တွက် အဝေးယာဉ်လိုင်းအချို့ လက်မှတ်ခဈေးနှုန်း ပုံမှန်ထက် နှစ်ဆခန့်အထိ တိုးမြှင့်ရောင်းချမှု ရှိကြောင်း ခရီးသွားနှင့် ယာဉ်လိုင်း တာဝန်ခံအချို့က ပြောသည်။
ယခုဘဏ္ဍာနှစ် ငါးလခွဲအတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တစ်ကျော့ပြန် မြင့်တက်လာ
၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ငါးလခွဲအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအ၀င် တစ်ကျော့ ပြန် မြင့်တက်လာပြီး ကန်ဒေါ်လာ နှစ် ဘီလီယံခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀င် ရောက်ခဲ့သည်။
နော်ဝေးနှင့်ပွဲ အကောင်းဆုံးရလဒ်ထွက်ပေါ်မည်ဟု စပိန်နည်းပြ လူးဝစ်အင်းနရစ်ယုံကြည်
စပိန်၏ပထမဆုံးယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲဖြစ်သည့် နော်ဝေးနှင့်ပွဲတွင် အကောင်းဆုံးရလဒ် ထွက်ပေါ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း စပိန်နည်းပြ လူးဝစ်အင်းနရစ်ကပြောကြားသည်။ ဥရောပပြိုင်ပွဲချန်ပီယံသုံးကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း များမကြာမီက ရလဒ်ပိုင်းဆိုးရွားခဲ့သော စပိန်တွင် နောက်ခံလူရာမို့စ်သည် သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမား ဖြစ်နေစဉ် တိုက်စစ်မှူးများ ဂိုးပေါက်ပုံမှန်ရှာတွေ့ရန် လိုအပ်နေသည်။
ဖင်လန်ကို လူငယ်အများစုဖြင့် ရင်ဆိုင်မည်ဟု အီတလီနည်းပြ မန်စီနီပြောကြား
ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲ အစ အူဒီးနိးစ်ကွင်း၌ ဖင်လန်ကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် အီတလီလူငယ် ကစားသမားများကို ထည့်သွင်း ကစားမည်ဖြစ်ကြောင်း အီတလီ နည်းပြမန်စီနီက ပြောကြားသည်။ မန်စီနီ၏ အီတလီအသင်း သားများသည် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ ဖလားဝင်ခွင့်လွဲချော်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ များလိဂ်ဖလားအုပ်စု ဒုတိယနေ ရာသာရခဲ့သော်လည်း ယူရိုပြိုင်ပွဲ ဝင်ခွင့်အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုး ပမ်းရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေသည်။
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တပ်ချုပ် ဂျပန်အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကို သီးခြားစီတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင် ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဟီရိုတိုအိဇုမိ ကို နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၌ မတ်လ ၂၁ ရက်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
မဟာသန္တိသုခကျောင်းတိုက်အမှု ဆုံးဖြတ်ချက်အမြန်ချပေးရန် အင်္ဂလန်ဆရာတော်မိန့်ကြား
မဟာသန္တိသုခကျောင်း တိုက်အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရား ရင်ဆိုင်နေရသည်မှာ ငါးနှစ်ခန့် ကြာမြင့်နေသဖြင့် အမြန်ဆုံးဆုံး ဖြတ်ချက်ချပေးရန် တရားစွဲဆိုခံ ထားရသော အင်္ဂလန်ဆရာတော် က ယမန်နေ့တွင်တောင်းဆိုမိန့် ကြားသည်။
KIO ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်နောင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
အစိုးရ၊ တပ်မတော်ကိုယ် စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် အမျိုး သားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC) နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက် ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) မထိုးရသေးသည့် တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို မတ် လ ၂၁ ရက်က နေပြည်တော်၌ ကျင်းပရာ ကချင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ (KIO/KIA) ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက် ရောက်ခဲ့သည့် ဗိုလ်မှူးကြီးခွန် နောင်အား 7Day Daily သတင်း စာအပါအဝင် မီဒီယာများကတွေ့ ဆုံပြီး ဆွေးနွေးပွဲတွင် KIO ပါဝင် ဆွေးနွေးမှုအခြေအနေ၊ NCA လက်မှတ်ထိုးရေး KIO ၏ သ ဘောထား၊ မြေပြင်စစ်ရေးအခြေ အနေနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေများ ကို မေးမြန်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အားနည်းချက်များ အရှိအတိုင်းတင်ပြရန် ဌာနဆိုင်ရာများကို သမ္မတတိုက်တွန်း
ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ် နေသည့်အကြောင်းအရာများကို အရှိအတိုင်းတင်ပြပါက အပြစ် တင်မည်မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံ တော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က ကချင် ပြည်နယ်ခရီးစဉ်၌ ပြောသည်။
ကျုံးဘေး ရေကစားမဏ္ဍပ် ခုနစ်နေရာသာ လေလံအောင်
ယခုနှစ် မန္တလေးမြို့ သင်္ကြန်တွင် ကျုံးဘေး၌ ချထား ပေးမည့် ရေကစားမဏ္ဍပ်ကြီး ၂၇နေရာအနက် ခုနစ်နေရာသာ လေလံအောင်မြင် သည်။
ကျောက်မိုင်းခွဲ၍ နံရံဆေးရေး ပန်းချီများ ပျက်စီးမှု မဖြစ်စေရန် မြင်စိုင်းမြို့ဟောင်းအနီးသို့ လုပ်ကွက်ပြောင်းရွှေ့မည်
မြင်စိုင်းမြို့ဟောင်း အနီး စိတ္တဂုတ္တလိုဏ်ဂူအတွင်း နံရံ ဆေးရေးပန်းချီများ ကျောက်မိုင်း ခွဲမှုများကြောင့် တုန်ခါမှုများဖြစ် ကာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်စေ ရန် အမှတ်(၃၆)အကြီးစား မှန် စက်ရုံ၏ လုပ်ကွက်ကို ပေခြောက်ထောင်အကွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ညှိနှိုင်းဆေ
ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့် စာရေးဆရာ ဝေဟင်အောင်ကို နိုင်ကျဉ်းအဖြစ် AAPP သတ်မှတ်
ဒေါက်တာအေးမောင် နှင့် လူငယ်စာရေးဆရာ ဝေဟင် အောင်တို့ကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)က ယမန်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေ ညာသည်။
သက်သေခံကတ်တစ်ခုလျှင် ဆင်းမ်ကတ်နှစ်ခုသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုမည့် အစီအစဉ် ဧပြီတွင်စတင်မည်
သက်သေခံကတ်ပြား တစ်ခုလျှင် ဆင်းမ်ကတ်နှစ်ခုသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုမည့် အစီအစဉ်ကို ဧပြီ ၁ ရက်တွင် စတင်ကျင့်သုံး မည်ဟု ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
ပူးတွဲကြေညာချက်များနှင့် ရွာလည်နေဆဲ ငြိမ်းချမ်းရေး
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း စဉ်သည် ယနေ့ ထက်တိုင် ရွာလည်နေဆဲ၊ တိုင် ပတ်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ အနာနှင့် ဆေးကလွဲနေဆဲ၊ ခုတ်ရာ တခြား ရှရာတခြား ဖြစ်နေဆဲပင် ဖြစ် သည်။ ဆွေးနွေးရင်း ဝေးဝေး သွားခဲ့ရသော သမိုင်းစာမျက်နှာ များကို သင်ခန်းစာယူကြရ
Graziaမဂ္ဂဇင်းမှာ လှပတင့်တယ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဖော်ပြခဲ့တဲ့ A Pink ကေပေါ့ပ်အဖွဲ့ဝင် ဘိုမီ
ကေပေါ့ပ် A Pink အဖွဲ့ဝင် ဘိုမီသည် Grazia မဂ္ဂဇင်းတစ်ကိုယ်တော်ပုံများတွင် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ရာလှပတင့်တယ်မှုများ ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဘီဗာလီဟေးစ်မှာ ကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၅ သန်းတန်အိမ်ဝယ်လိုက်တဲ့ ဂျပ်စတင်ဘီဘာ
ပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့် ဂျပ်စတင်ဘီဘာက ဇနီးဟိုင်လေ ဘယ်လ်ဝင်နှင့်အတူ အခြေချ နေထိုင်ရန် ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ဘီဗာလီဟေးစ်မြို့တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၅ သန်းတန် အိမ်တစ်လုံး ၀ယ်ယူကြောင်း ၎င်း တို့နှင့်ရင်းနှီးသော သတင်းရင်း မြစ်များက ပြောကြားသည်။
ဇာတ်ကားနှစ်ကားအတွက် အကယ်ဒမီရင်ခုန်နေတဲ့ ၀တ်မှုံရွှေရည်
ယနေ့ညနေတွင် ကျင်းပ မည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ ၌ ဇာတ်ကားနှစ်ကားပါဝင်သဖြင့် ရင်ခုန်ကြောင်း သရုပ်ဆောင် ၀တ်မှုံရွှေရည်က ပြောသည်။
မုန်းစွဲရုပ်ရှင်တစ်ကားလုံးစာ ဗီဒီယိုဖိုင်များ အွန်လိုင်းတွင်ပျံ့နှံ့မှုကို စုံစမ်းအရေးယူမည်
မုန်းစွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အွန်လိုင်းစာမျက်နှာ၌ ပျံ့နှံ့ခဲ့သည့် အပေါ် စုံစမ်း၍ အရေးယူမည်ဟု ယင်းဇာတ်ကားထုတ်လုပ်သူ ကို ဝေမင်းမောင်က ပြောကြားသည်။
ခြေဥကော်မတီအစည်းအဝေးခေတ္တရပ်နား၊ အခန်း လေးခန်းဆွေးနွေးပြီးစီး၊ ဧပြီ ၂၂ ရက် တွင် ပြန်စမည်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအ ခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်း ကော်မတီအစည်းအဝေး ခုနစ် ကြိမ်ပြုလုပ်ရာတွင် အခန်း (၁) မှ အခန်း (၄) အထိပုဒ်မများကို ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ကာ အစည်းအ ဝေး ခေတ္တရပ်နားထားမည်ဖြစ် ကြောင်း ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ကပြောသည်။
မြောက်ဦးကျည်သင့်မှု ပြတ်သားစွာအရေးယူရန် နိုင်ကျဉ်းဟောင်းအဖွဲ့တောင်းဆို
တပ်မတော်နှင့် ရခိုင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (AA) တို့ တိုက်ပွဲကာလအတွင်း မြောက်ဦး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအ တွင်း လက်နက်ကြီးကျခဲ့ခြင်းအ ပေါ် မည်သူ့လက်ချက်ဖြစ်သည် ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူပေး ရန် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း များအဖွဲ့ (FPPS) က တောင်းဆို သည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်တို့အား ချမှတ်သည့်ပြစ်ဒဏ် အစိုးရနှင့် မပတ်သက်ဟု သမ္မတရုံးပြော
ဒေါက်တာအေး မောင်နှင့် စာရေးဆရာဝေဟင် အောင်တို့အား ချမှတ်ထားသောအမိန့်များသည် တရားရုံးက ဥပဒေနှင့်အညီ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အစိုးရပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။